रोचक प्रसङ्गहरुको प्रस्तुति – मझेरी डट कम
नेपाली वाङ्मयलाई सुदृढ र समृद्ध तुल्याउनमा साहित्यका विविध विधाहरूको भूमिका उल्लेखनीय छ । स्रष्टाहरूले विभिन्न विधामा कलम चलाएर नेपाली साहित्यलाई जीवन्त र पठनीय बनाएका छन् । यसै सन्दर्भमा जीवनी साहित्य पनि पाठकवर्गमा रुचिकर सामग्री हुँदै आएको छ । त्यसमाथि महापुरुषहरूको सङ्घर्षमय गाथाको प्रस्तुति, आरोह-अवरोह, हाउभाउले त्यसबेलाको समाजको परिस्थितिको आँकलन गर्न सहयोग पुर्‍याउँदछ । त्यसैगरी यस्ता जीवनी साहित्यले हामीलाई जीवनयापनको क्रममा संवेदनशील, सचेत र सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न मद्दत पुर्‍याउँदछ भन्नु अत्युक्ति नहोला ।
यसै सेरोफेरोमा लेखक प्रकाश ए. राजले ‘महाराज जुद्धशमशेरको जीवनी’ नामक पुस्तक पाठकसामु पस्केका छन् । चार खण्डमा विभाजित पुस्तकमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको जन्मदेखि मृत्युसम्मको बेलिविस्तार पढ्न पाइन्छ । इतिहासका विभिन्न पुस्तकहरूमा उनका बारे पढिसकिएको भए पनि जुद्धशमशेर धीरशमशेरका छोराहरूमा कान्छा नभएर विवाहिता पत्नीका छोराहरूमा कान्छा हुन् भन्ने ज्ञात हुन्छ । त्यसो त आफ्नो अन्तिम समयताक बालक जुद्धशमशेरको भविष्यप्रति चिन्तित धीरशमशेरलाई वीरशमशेरको आश्वासन र प्रारम्भमा विपन्नतामा गुज्रेका जुद्धशमशेर प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको घोचपेचले चिफसाहेबको रोल क्रमबाट पनि राजीनामा दिन तम्सेको प्रसङ्ग पुस्तकको पठनीय पक्ष रहेको छ ।
तेह्र वर्षसम्म देशको बागडोर सम्हालेर सत्ता र शक्तिले मैमत्त भएका जुद्धशमशेरको यति लामो शासन कालमा देशमा अनेकौँ राम्रा-नराम्रा युगान्तकारी घटनाहरू भए । ९० सालको ठूलो भूकम्पको विनाशको सामना देशले यिनैको शासनकालमा गर्नुपर्‍यो । चन्द्रशमशेरले कोरेको राणाहरूको वर्गीकरणलाई यिनले मलजल गरेर अन्त्यमा आफ्नो जहानियाँ शासन विरोधी आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम गरे । त्यसो त विश्वमा आएको प्रजातन्त्रको लहरलाई आत्मसात गर्दै देशमा एकतन्त्रीय शासन प्रणालीबाट आक्रान्त भएका जनताहरूको आवाजलाई मुखरित गर्दै प्रजातन्त्रको उज्यालो छर्न तम्सेका युवाहरूलाई सं. १९९७ मा मृत्युदण्ड दिएर आफू कलङ्िकत पनि नभएका होइनन् । देशमा भए घटेका सुधारवादी क्रियाकलापहरूलाई दवाएर यिनले आफ्नो सक्कली रूप देखाउन पनि पछि परेनन् ।
यति भन्दाभन्दै पनि यिनको शासनकालमा विश्वले दोस्रो महासमरको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यसलाई ध्यानमा राखी देशमा केही उद्योगहरू स्थापना हुन गए । सङ्ग्रहालय, वारुणयन्त्र, चिडियाखाना, कागजी नोट निष्कासन आदि केही सकारात्मक कार्यहरू पनि भए ।
त्यसो त नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा ‘शारदा’ पत्रिकाको प्रकाशनको श्रेय पनि यिनकै कार्यकालको पोल्टामा जान सक्दछ । राणा प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये बढी सन्तानका धनी यिनको राजपरिवार, निजामती सेवा तथा सेनामा अधिक वर्चस्व रहेको देखिन्छ ।
पुस्तकको समग्र अध्ययनपश्चात १३ वर्षसम्म शक्तिको एकछत्र भोग, वीर सपूतहरूलाई दिएको मृत्युदण्ड, शिकारका नाममा वन विनाश तथा वन्यजन्तुको हत्या, आफ्नै कुलका भाइभतिजाहरू निष्कासन आदि विविध कारणले यिनले राजपाठ त्याग गरेको भान हुन्छ । त्यसो त स्वच्छाले राजपाठ त्याग गरेर जाँदाजाँदै सरकारी ढुकुटी रित्याएको प्रसङ्गले पनि यिनको नियत बुझ्न सकिन्छ । यस्तै यस्तै रोचक विषयवस्तुले पुस्तक पठनीय बनाएको छ । लेखकका पुर्खाहरू जुद्धशमशेरको नजिक भएका हुनाले होला सायद पुस्तक जुद्धशमशेरप्रति अलि नरम र सकारात्मक रहेको प्रतीत हुन्छ ।
पुस्तक ः महाराज जुद्धशमशेरको जीवनी
लेखक ः प्रकाश ए. राज
प्रकाशक ः नवीन पब्लिकेसन्स, काठमाडौँ
संस्करण ः पहिलो २०६६ भदौ
पृष्ठ ः १०-६८
मूल्य ः रु.१००।-